Ukumaketha Okunomthelela: Umlando, Ukuziphendukela Kwemvelo, Nekusasa | Martech Zone
Abathonya bezokuxhumana: lokho kuyinto yangempela? Njengoba imithombo yezokuxhumana yaba yindlela ekhethiwe yokuxhumana nabantu abaningi emuva e2004, abaningi bethu abakwazi ukucabanga izimpilo zethu ngaphandle kwayo. Into eyodwa imithombo yezokuxhumana ekushintshele nakanjani ukuthi ibe ngcono ukuthi ikwenze kwaba nentando yeningi ukuthi ngubani oduma, noma okungenani owaziwayo.
Kuze kube muva nje, bekufanele sithembele kumabhayisikobho, komagazini, nakuzinhlelo zethelevishini ukusitshela ukuthi ngubani odumile. Manje abantu sebengasebenzisa imithombo yezokuxhumana ukwaziwa kakhulu emkhakheni wabo wentshisekelo. Uma ufuna ukuba internet odumile okokufundisa ukwakheka, kukhona umphakathi walokho!
Lokhu kusho nokuthi abantu sebengazenzela imali ngokusebenzisa izinkundla zokuxhumana. Ungakha okulandelayo ngaphakathi komphakathi, waziwe ngesisekelo sakho solwazi kulo mphakathi oshiwo, bese uzivulela amathuba akhona lapho okuthunyelwe kwabathonya.
Le ndlela yokuphila ayinayo imithethonqubo, noma kunjalo, yize kuyimboni entsha sha. I-FCC ifuna ukuqinisekisa ukuthi abantu bazi ukuthi babheka izikhangiso, yingakho uzohlala ubona Okuqukethwe okuxhasiwe kusakazeke kokuthunyelwe kwebhulogi noma #ad kokuthunyelwe kwe-Instagram.
Yize kunjalo, abantu bathambekele ekutholeni abagqugquzeli bezokuxhumana bethembekile ukwedlula abakhulumeli bosaziwayo abakhokhelwayo - ama-70% entsha athi amaYoutubers ahlonishwa kakhulu kunosaziwayo, kuyilapho ama-88% abantu ethemba izincomo eziku-inthanethi njengalezo abazithola emndenini nakubangani.
Ukucaphuna uSeth Godin, Abantu bangakwazi "ukuhogela i-ajenda yomholi". Lokhu akukaze kube yiqiniso ngokwengeziwe uma kukhulunywa ngokukhangisa okunomthelela. Ukugcina abalandeli abathembekile, kufanele uthande futhi ukholwe kulokho okugunyazayo. UMari Smith ocashunwe nguJohn White, Ukuthi Ukuphakama Kwabathonya AbanjengoLilly Singh no-Andrew Bachelor Kukuphazamise Kanjani Ukukhangisa
Funda kabanzi mayelana nalo ukuvela komthonya kusuka kule infographic!
Tags: unxusaamanxusa omkhiqizoizincomo zosaziwayoukuvela komthonyaumthelelaukumaketha kwamathonyainfographiczokuxhumana ezithinta ezenhlalookuqukethwe okuxhasweabagqugquzeli be-youtube
Ngo-Okthoba 2017, Udinga Ukuba Nesitifiketi Se-SSL Esingabonakali